site ha na 21-07-20
SELV na-anọchite anya nchekwa nchekwa ọkụ ọzọ. Fọdụ akwụkwọ ntuziaka ike-AC-DC na-ebu ịdọ aka na ntị gbasara SELV. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịdọ aka na ntị banyere ijikọ mmepụta abụọ n'usoro n'ihi na volta ọkụ na-ebute elu nwere ike karịa ihe SELV nchekwa akọwapụtara ...
Ultra nwere Ultrathin LED Driver?
site ha na 21-07-10
Ee, anyị nwere ultra mkpa duru ọkwọ ụgbọala ike ọkọnọ nke kwesịrị ekwesị maka enwu enyo, ada warara ìhè, ọgụgụ isi mirror na kabinet ọkụ. Onyinye ike ultrathin na-agbanwe agbanwe bụ 12V / 24V DC, nhọrọ ntinye ntinye 90-130V / 170-264V AC. Mmepụta ike nhọrọ 24 ...
Ọ bụ ihe nkịtị na ihu igwe dị elu nke ọkwọ ụgbọala na-eduga dị oke elu?
site ha na 21-07-06
Fewfọdụ n'ime ndị ahịa anyị gbagwojuru anya na ihu igwe dị elu nke ọkwọ ụgbọ ala dị elu dị oke elu. Ọ bụ n'ihi adịghị mma mma? Ọtụtụ ndị ga-eche otú ahụ, mana ọ bụghị eziokwu. Iji wepụ okpomọkụ, anyị na-eduga ọkwọ ụgbọala ga b ...
Kedu ihe kpatara ọkụ m ji agba ọkụ?
site ha na 21-07-02
Ọ dịghị ihe na-eme ka oghere gafere site na ịma mma gaa na squalor ngwa ngwa karịa bọlbụ na-egbukepụ egbukepụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ịchọrọ idozi ozugbo, yabụ nke a bụ ngwa ngwa nke ihe ndị mere ọkụ gị nwere ike ghara ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ bara uru ịmara na ọrụ LED dị ka com ...
Gịnị bụ ihe UL klas 2 ada onye ọkwọ ụgbọala?
UL Class 2 du ọkwọ ụgbọ ala na-agbaso ụkpụrụ UL1310, nke pụtara na mmepụta a na-ahụta dị ka ihe dị mma iji kpọtụrụ ma enweghị nchebe nchebe dị mkpa na ọkwa LED / luminaire. Enweghị nsogbu nke ọkụ ma ọ bụ ọkụ eletrik. ...
Olee otú iji dozie nsogbu banyere waterproof ike ọkọnọ?
Ike ọkọnọ nwere oke: ọkwa IP, ya bụ, enweghị uzuzu na akara mmiri. Jiri IP site na nọmba abụọ iji gosi, nọmba nke mbụ na-egosi ọkwa nchedo steeti siri ike nke ngwaọrụ ahụ, nọmba nke abụọ na-egosi ọkwa nchedo mmiri nke ihe ndozi ...
Kedu ihe choro ebe ekwesiri itinye ike?
site ha na 21-06-05
Gburugburu na-ekpebi ụdị ọkụ ọkụ ọkụ dị iche iche dabara adaba maka mkpa gburugburu ebe obibi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị wụnye ọkụ ọkụ mmiri na-adịghị mmiri mmiri n'èzí ma ọ bụ na mmiri ma ọ bụ ebe mmiri na-adịghị, ị kwesịrị iwere ọkụ ọkụ ọkụ na-enweghị mmiri w ...
Kedu ihe kpatara ike ọkọnọ ji adighi arụ ọrụ?
Dịka ihe dị mkpa na ọkụ ọkụ, ogo onye ọkwọ ụgbọ ala na-emetụta ntụkwasị obi na nkwụsi ike nke mkpokọta. Dabere na ikanam ọkwọ ụgbọala na ndị ọzọ yiri teknụzụ na ahịa ngwa ahụmahụ, anyị na-enyocha ọdịda nke oriọna imewe na applicatio ...
Ihe atọ ịkwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ onye ọkwọ ụgbọ ala ịdu
Mmepụta Ike (W) E nyere uru a na watts (W). Jiri onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ dịkarịa ala otu uru ahụ dị ka ọkụ (s) gị. Onye ọkwọ ụgbọ ala ga-enwerịrị ike dị elu karịa ka ndị LED gị chọrọ maka nchekwa ọzọ. Ọ bụrụ na mmepụta bụ Ẹkot ka Ikanam ike chọrọ, ọ na-agba ọsọ ...
Antnọgide na-enwe VS Constant Volta
Ndị ọkwọ ụgbọala niile na - agbanwe agbanwe (CC) ma ọ bụ voltage mgbe niile (CV), ma ọ bụ ha abụọ. Nke a bụ otu n’ime ihe mbụ ị ga-achọ ịtụle mgbe ị na-eme mkpebi. Mkpebi a ga-ekpebi site na Ikanam ma ọ bụ modulu ị ga-agbanye, ozi maka ca ...
Kedu otu mmiri / uzuzu na-eguzogide mmiri ka onye ọkwọ ụgbọ ala gị kwesịrị ịdị?
Kedu otu mmiri / uzuzu na-eguzogide mmiri ka onye ọkwọ ụgbọ ala gị kwesịrị ịdị? Ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala gị na-aga ebe ọ nwere ike ịbanye na mmiri / uzuzu, ịnwere ike iji onye ọkwọ ụgbọ ala IP65. Nke a pụtara na ọ na-echebe ya pụọ ​​na ájá na mmiri ọ bụla atumatu na ya. ...
【New】 Super mkpa ada ada ọkọnọ maka mirror ọkụ
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na ọhụụ ọhụrụ anyị nwere maka ike inye ọkụ ọkụ ọkụ. Nke a bụ ụdịdị nke usoro HVAC. Ngwaahịa dị mkpa dị ka 16.5mm! Mmepụta Volta 12V / 24V Power Wattage 25W / 36W / 48W / 60W Ntinye Ntinye 200-240V IP42 Waterproof Cert ...